Madaxda Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku wajahan | Keydmedia
Madaxda Puntland iyo Jubbaland oo Muqdisho ku wajahan
Wafuudaan ayaa isugu jiro hab maamuuska madaxda iyo ciidamo hor u dhac ah ilaalada madaxdaas.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wafuud hor-u-dhac u ah safarka madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Wafuudaan ayaa isugu jiro ciidamo ilaalo ah iyo xubnaha maamuuska, kuwaas oo diyaarinaya qaban qaabada soo dhaweynta madaxda Puntland iyo Jubbaland ee Muqdisho imaanaya.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa maalinta Isniinta ah imaanaya Muqdisho, halkaasoo shir wadatashi ah oo ku saabsan xal ka gaarista xaalada siyaasadeed iyo hannaanka doorashada la yeelanaya Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Labadaan mas'uul ayaa la sheegayaa in hoy ay degaan looga diyaariyay nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya, halka markii la qorsheynayay agagaarka garoonka diyaaradaha.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Madaxweynaha Puntland uu diiday inuu dego gudaha Garoonka Diyaaradaha Muqdisho oo markii hore warar soo baxayay ay sheegayeen in isaga iyo Axmed Madoobe degayaan gudaha Garoonka diyaaradaha, dad kala duwan ay u soo jeediyeen inay sidaas sameeyaan.
Madaxweyne Saciid Deni oo aan weli cag soo dhigin Muqdisho tan iyo markii la doortay ayaa go'aansaday in uu gudaha magaalada dego, waxaana xusid mudan in Siciid Deni uu ku dhashay degmada Howl-wadaag uu yaarntiisa joogi jiray, sidaas awgeedna aysan ku habooneen in uu dego banaanka magaalada.
Dhanka kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa isagana degi doona isla madaxtooyada Villa Somalia, arrintaan ayaa dhalineysa kalsooni siyaasadeed iyo is aaminaad dhex marta Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Jubbaland iyo Puntland oo horay xiriirkooda xumaa.